छाती दु’खेर ढ’ल्दा होम क्वारेन्टिनमा बसेका एक पुरुषको मृ’त्यु ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/छाती दु’खेर ढ’ल्दा होम क्वारेन्टिनमा बसेका एक पुरुषको मृ’त्यु !
छाती दु’खेर ढ’ल्दा होम क्वारेन्टिनमा बसेका एक पुरुषको मृ’त्यु !
२० साउन, चितवन । पूर्वी चितवनको खैरहनीमा होम क्वारेन्टिनमा बसेका एक पुरुषको मृ’त्यु भएको छ । खैरहनी नगरपालिका–६ स्थित एक बोरा उद्योगमा काम गर्ने ३५ वर्षका एक पुरुषको गएराति मृ’त्यु भएको हो । बाराबाट १३ दिन अगाडि चितवन आएका ती पुरुषले साथीहरुलाई एक्कासी छाती दु’खेको र त्यसपछि ढ’ल्दा मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृ’त्यु भएका पुरुष खैरहनी–६ पुरानो पर्सामा रहेको केसी बोरा उद्योगमा काम गर्ने मजदुर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका प्रमुख ऋषिराम घर्तीमगरले जानकारी दिए । उनीसँगै बाराबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका अन्य ५ जनामा हालसम्म कुनै स’मस्या देखिएको छैन ।
मृ’तक पुरुषको स्वाब संकलन गरी पीसीआर बिधिबाट को’रोना टेष्टको तयारी गरिएको छ । मृ’तक कलैया नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनको श’व के गर्ने भन्ने विषयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग छलफल भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका प्रहरी निरीक्षक ऋषिराम घर्तीमगरले जानकारी दिए ।
आँसुले भात मुछेर खाइरहेका सञ्‍जीव आफैँसँग प्रश्न गर्छन्, ‘के भयो जीवनमा ? (हेर्नुहोस भिडियो)